76- Dhaqdhaqaaqyadii ciidammeed ee ku xigey Daa'if
Rasuulku SCW markii uu ku soo laabtay Madiina bishii Duq-Qacda, sannadkii 8aad ee hijriga ma uusan bixin ilaa laga gaaray bishii Rajab, sannadkii 9aad ee hijriga ee uu u baxay duullaankii Tabuuk. Hase yeeshee wuxuu Rasuulku SCW diray ilaalooyin ciidameed oo uu u kala diray jihooyinka sidoo kale wuxuu diray rag badan oo uu u kala diray qabiilooyinkii muslimiinta si ay sakada uga soo ururiyaan islaamkana u baraan. Haddaba haddii aan soo qaadanno duullaamadii waxa ay kala ahaayeen sidatan:
1. Ilaaladii Cuyayna binu Muxsin oo la diray bishii Muxarram, sannadkii 9aad ee hijriga, wuxuu Rasuulku SCW u diray reer banii Tamiim. Sababta uu Rasuulku SCW u dirayna waxa ay ahayd in gaaladii reer banii Tamiim ay diideen jisyaddii. Cuyayna wuxuu watay 50 nin oo fardooley ah oo aysan ku jirin Muhaajiriin iyo Ansaar. Cuyayna iyo ciidankiisii way baxeen iyaga oo habeenkiina soconaya, maalintiina degaya ilaa ay ugu dambayntii ka weerareen cadowgii, wuuna baqday oo kala cararay. Cuyayna wuxuu gacanta ku soo dhigay 11 nin, 21 haween ah iyo 30 carruur ah, wuxuuna keenay Madiina. Dabadeed waxaa ka daba yimid 10 nin oo madaxdii qabiilkaas ah oo Rasuulka SCW la hadlay, islaamayna, Rasuulkuna SCW wuxuu u celiyey maxaabiistoodii.
2. Ilaaladii Qudba binu Caamir oo ka koobnayd 20 nin waxa uu Rasuulku SCW diray bishii Safar isla sannadkii 9aad ee hijriga, waxa uuna u diray qabiil ka mid ahaa reer Khuthcam oo degganaa agagaarka meesha la yiraahdo Tubaala. Qudba iyo raggiisii way baxeen ilaa ay kala kulmeen cadowgii, waxaana dhex maray dagaal daran ilaa labada qolaba uu dhaaawacu ku batay, Qudbana ku shahiiday, ka dibna muslimiintii waxa ay ku soo laabteen Madiina iyaga oo qaniimo wata.
3. Ilaaladii Daxaak binu Sufyaan oo uu Rasuulku SCW diray bishii Rabbiicul-Awal, sannadkii 9aad ee hijriga, wuxuuna u diray reer banii Kulaaba, wuxuuna amray in islaamka loogu yeero, hase yeeshee islaamkii way diideen, wayna dagaallameen, dabadeedna jab baa ka raacay oo muslimiintii ayaa guulaystay.
Waxaa kale oo jirtay Ilaaladii Calqama binu Mujsis oo ka koobnayd 300 oo nin, Rasuulkuna SCW u diray xeebta Jidda bishii Rabbiicul-Aakhir, sannadkii 9aad ee hijriga.